मतदान अधिकृत हुँदाको भोगाई र अनुभव !| Janachaso Khabar
शनिबार १८ असार, २०७९ | Saturday, July 2, 2022
मतदान अधिकृत हुँदाको भोगाई र अनुभव !
मतदानको दिन नजिकिदै गर्दा चहलपहल पनि बढिरहेको थियो। गाउँघर देखि चिया पसलसम्म चुनावकै बारेमा विभिन्न अड्कल र भबिष्यवाणी हुने गर्थे। हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदीय आचरणमा बस्नुपर्ने भएकाले कुनैपनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा मत माग्ने कुरा हाम्रो नैतिक आचरणले दिएन । त्यही भएर नत कुनै दलको झण्डा बोकियो, न त कुनै प्रचार प्रसारमा गईयो, नत कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा भोट मागियो। यसैबीच कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत सरस्वति मा.वि. ओलानीमा मलाई मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको रहेछ। मेरो नेतृत्वमा एक जना सहायक मतदान अधिकृत, दुई जना सहायक कर्मचारी र एकजना कार्यालय सहयोगीको टिम थियो। मतदान हुने दिनको ३ दिन अगावै मतपत्र,मतपेटिका लगायतका आवश्यक सामग्री बुझी मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नु पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीको टोलीसँग समन्वय गरी १५ जना सुरक्षाकर्मीका साथ मतदान केन्द्रमा पुग्यौँ । मतदान केन्द्र पुग्ने वित्तिक्कै विद्यालयका प्र.अ.लाई फोन गरेर बोलाए । सबै दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई फोन गरेर सोहि दिन सर्वदलीय बैठक राख्यौँ र मतदानसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरु गरयौँ ।
मतदान केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बाँस, डोरी लगायतका आवश्यक सामग्री स्थानीय गाउँलेहरुबाट जोहो गर्यौँ । अर्को दिन मतदान केन्द्र निर्माणमा जुट्यौँ । म्यादी, प्रहरी र कार्यालय सहयोगी समेतको प्रयासमा मतदान केन्द्र निर्माणको कार्य सम्पन्न गरियो। सुरक्षाकर्मीको लागि खाजा खाना भत्ता भनेर छुट्टै दिइएको थिएन । म्यादी प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरुले चर्को गर्मीका बाबजुद पनि दिनभरी दुःख गरेर मतदान केन्द्र निर्माण गरेकाले चामल दाल तरकारीका साथै एउटा सानो खसीको समेत व्यवस्था गर्नु भनी हामी तीन जना मतदान अधिकृत मिलेर २० हजार रुपैया संकलन गरी हवल्दार साहेबलाई दियौँ । वहाँले भने बमोजिम नै सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुभयौँ । म्यादी प्रहरी, सुरक्षाकर्मी र हाम्रो कर्मचारीको टिम सबै एकै ठाउँमा जम्मा भई रातीको खाना सँगै खायौँ । त्यसपछि हामीले भोलि मतदानको दिन को कसले के के काम गर्ने ? र मतदानलाई सफलतापूर्वक कसरी सम्पन्न गर्ने भनी सइ साहेब र सम्पूर्ण कर्मचारी सँगै राखेर सानो अभिमूखिकरण कार्यक्रम गरयौँ । सबैलाई निजहरुको भूमिका बारे जानकारी गराए ।
सबैले आ आफ्नो भूमिका प्रष्ट भइसकेपछि सुत्ने व्यवस्थापनमा लाग्यौ। विद्यालयभित्र सुत्नको लागि खाट र गतिलो खालको विस्तारा हुने कुरा भएन । गर्मीको समय लामखुट्टेको पनि समस्या थियो । सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी समेत गरी ४० जना भन्दा बढीको संख्या भएकाले सुत्नको लागि समस्या हुने नै भयो । कोही बेन्चमा, कोही कार्पेटमा, कोहि भुइमा गरी हामीले जसोतसो सुत्ने वातावरण बनायौँ । निद्रा राम्ररी परेन। त्यसैमा मौसमको चिन्ता । २/३ दिनदेखि पानी र हावाहुरी चलिरहेकाले मतदान कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । तरपनि मतदान सम्पन्न गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र संकल्पकासाथ प्रतिकुलतमा अनुकूलताको खोज्दै सुत्यौ । बिहान ३.०० नबज्दै निन्द्रा खुलिसक्यो!
मोवाइल खोले विभिन्न news हरु पढे र फेसबुक खोले, ४.०० बज्यो । उठेर बाहिर गए र सबभन्दा पहिला आकाशतर्फ हेरे, आकाश त पुरै खुलेर तारा देखिरहेका थिए । खुशी भए, लाग्यो प्रकृतिले पनि साथ दिएछ । सँगै सुतेका सहायक मतदान अधिकृत दिनेश सर र अन्य साथीहरुलाई उठाए हातमुख धोएर फ्रेस भयौँ । साथीहरुले मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्चा पोष्टर र सूचनाहरु टाँस्नमा लागे । एकैछिनमा मतदान केन्द्र पनि सिंगारिएछ, चिटिक्क देखियो । सुरक्षाको बिषयमा बिहानै सई साहेबलाई भेटेर कुरा गरिसकेको थिए । सुरक्षाको बारेमा ढुक्क हुनुहोस हामीले सबै व्यवस्थापन गरिसकेका छौ भन्नुभयो ।कर्मचारी साथीहरु पनि सबै जाँगरिलो र फुर्तिलो देखिनुहुन्थ्यो। एकदिन पहिला नै अभिमुखिकरण गरेकाले होला सबै साथीहरु आ आफ्नो भुमिका अनुसार सिटमा तयारी अवस्थामा बस्नुभएको थियो ।
शुरुमा नामावली रुजु गर्ने काम तिर्थ सर, चिन्ह लगाउने काम समिना मेम, तथ्यांक भर्ने काम बिष्ना मेम र मतपत्र दिने जिम्मेवारी दिनेश सरलाई तोकेको थिए । उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई बिहानै ६.०० बजे बोलाएपनि केहि प्रतिनिधि ढिला आएकाले ६:३० मा मतपेटिका सिल गरेको र मतपत्र खोलेको लगायतको मुचुल्का गरयौँ । मतदाताहरु भने ७.०० नबज्दै गेटमा आएर लाईन लागिसकेका थिए । मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्न तछाड मछाड गर्दै थिए । प्रहरीहरुलाई नियन्त्रण गर्नै हम्मे हम्मे परिरहेको थियो । ७.०० बज्यो र प्रहरीले ढोका खोली बिस्तारै भित्र प्रवेश गराउन थाले । मैले मतपत्रको एउटा ठेलीमा दस्खत गरेर सहायक मतदान अधिकृतलाई दिइसकेको थिए । अगाडिको बेन्चमा कर्मचारीहरु र पछाडिको बेन्चमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरु बसेका थिए । हामीले गरेका प्रत्येक कार्यहरुलाई नियालेर हेरिरहेका थिए । लाग्थ्यो कि उनीहरुलाई हामीले गरेका काममा पूर्ण विश्वस्त छैनन !
मैले प्रतिनिधिहरुलाई पहिले नै भनेको थिए । यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा तपाईहरुलाई नै बढी थाहा छ । हामी त नयाँ मान्छे हौँ । केहि कुरा चित्त नबुझे मलाई भन्नुहोला। आपसी छलफलबाट निकास निकालौला। विवाद नगरिदिनुहोला । सबैभन्दा बढी समस्या अशक्त मतदाताको सन्दर्भमा आउन थाल्यो। मतसंकेत गर्न नसक्ने अशक्तको हकमा निजको एकाघरकोले मतसंकेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था थियो । सोहि अनुसार प्रतिनिधिलाई जानकारी गराईसकेको थिए। प्रतिनिधिहरुले सहमति जनाएपछि मात्रै मतसंकेत गर्नको लागि अनुमति दिने गर्थे । जब एकजना ४०/४५ बर्षकी महिलाको हकमा मतसंकेत गर्न निजको छोरा साथमा आउनु भयो । प्रतिनिधिहरुले पनि सहमति जनाएकाले मैले मतसंकेत गर्न अनुमति दिए, तर एकजना प्रतिनिधि त्यतिवेला अर्कै ध्यानमा रहेछन् । निजले सो कुरा थाहा पाएनन् । तर जब मतसंकेत गरेर मतपेटिकामा मत खसाल्न लाग्दा मात्रै देखे ! अनि त विरोध गर्न थाले यिनी कसरी अशक्त हुन सक्छन् । न कुनै विरामी न उमेरले नै वृद्ध, एकदमै स्वस्थ्य मान्छे कसरी अशक्त हुन सक्छन् ? यो त मान्दै मान्दैन । म त अब केटाहरुलाई बोलाउँछु भनेर चर्को स्वरले बोल्न थाल्यो । अब के गर्ने ? मतपत्र मतपेटिका खसाइसकेको छ ।
मैले भने तपाईहरु सबै प्रतिनिधिले सहमति जनाएकोले मैले मतदान गर्न अनुमति दिएको हो । अब तपाईको ध्यान अर्कै ठाउँमा रहेछ त मलाई के थाहा ? अब यसलाई ठुलो Issue नबनाउ बस्नुहोस् भनी अनुरोध गरे तर पनि मानेनन् । एकछिनमा त बाहिर गेटमा पनि हुलदंगा भएको आवाज आउन थाल्यो । मैले सुरक्षाका सइ साहेबलाई खबर गरे । बाहिर अलि सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न परयो बरु थप फोर्स मगाउनु पर्ला भने। सइ साहेबले भने सुरक्षाको जिम्मा हामीलाई छाडिदिनुस् हामी गरिहाल्छौ । बाहिर सुरक्षाकर्मीले हुल व्यवस्थापन गर्नथाले र भित्र मैले प्रतिनिधिलाई धेरै अनुरोध गरी सम्झाई बुझाई गर्दा बल्ल कन्भिन्स भए र मतदान कार्य अगाडि बढ्यो । विच विचमा मतपत्रमा दस्तखत गर्ने र २/२ घण्टामा खसेको मतको तथ्यांक मेसेजबाट पठाउने कार्यपनि गर्दै गए।
४.०० बज्नै लाग्दा एकजना महिला नाम ढाँटी अर्कैको परिचपत्र लिएर मतदान गर्न आएकि रहेछन् । मुखमा मास्क लगाएकी थिइन् । पछाडि बसेका दलका प्रतिनिधिहरुले शंका माने र मास्क खोल्न भने, फोटो र अनुहार मिलेको थिएन । यो फेक मान्छे हो, कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हल्ला गर्न थाले । फोटो हेर्दा मलाई पनि शंका लाग्यो। मैले निजले बोकेको परिचय पत्र थुतेर हातमा लिए । अनि उहाँको जन्ममिति सोधे, अलि डराएर भनिन् तर परिचय पत्रसँग मिलेन। त्यसपछि मैले तपाईको बुवाको नाम भन्नुहोस् भने भन्न सकिनन् । त्यसपछि त्यहाँ प्रतिनिधिहरुले हो हल्ला गर्न थाले, उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ नत्र हामी मान्दैनौ । भिडियो बनाएर भाइरल गरिदिन्छौ भन्न थाले। सुरक्षाकर्मीहरु पनि तुरुन्तै आइहाले।
मैले उहाँहरुलाई शान्त हुन अनुरोध गरे र कानूनमा भएको व्यवस्था सम्झाउन थाले। मैले भने तपाई प्रतिनिधिहरु मध्ये यदि कसैले निजले नाम ढाँटी मतदान गर्न आएको भन्ने विश्वास लाग्छ भने एउटा अनुसूची फाराम भरेर सय रुपैया धरौटी राखी म कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ। मैले अनुसन्धान गर्दा उक्त कुरा प्रमाणित भयो भने बढीमा रु. २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार मसँग छ । ल अब तपाईहरु नै निर्णय गर्नुहोस् के गर्नहुन्छ ? उजुरी दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ? यति सुनेपछि ति महिला पनि आँखाभरी आँसु बनाएर रुन थालिन् । त्यसपछि ती जनप्रतिनिधिहरु पनि केहि बोल्न सकनेन् । उजुरी गर्ने आँट कसैले गरेनन् । त्यसपछि ती महिलालाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर पठाए र मतदान प्रकृया अगाडि बढ्यो । ५.०० बजे मतदान कार्य समाप्त भयो । सबैप्रतिनिधिहरुलाई जम्मा गरेर मुचुल्का गरी मतपेटिका बन्द गर्यौँ । प्रहरीहरुले अब मतपेटिका लगौँ भन्न थाले । मैले डिएसपी साहेबलाई फोन गरे तर उहाँले मान्नुभएन । हाम्रो सेनाको टोली आउँछ । स्कर्टिङ्ग गरेर मात्र लग्नुहोला भन्यो । एकछिमा सेनाको गाडि आयो र स्कर्टिकङ्ग गरेर मतपेटिकाहरु निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाए। राहतको सास फेरे। उक्त रात आनन्दको निन्द्रा पर्यो ।
(दान बहादुर सुनार नेपाल सरकारका कानून अधिकृत हुन्)
ल गरिहाल डिभोर्स, म पनि तँ सँग बस्दिन !
असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ: सभामुख
अमेरिकी अदालतले महिलालाई गर्भपतनको अधिकार कुण्ठित गरेकामा विरोध
जनचासो खबर| असार १८, २०७९ शनिबार
परस्त्रीसँग फक्रिएको प्रेम सम्बन्ध !
जनचासो खबर| जेठ २१, २०७९ शनिबार
स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिक उत्साह र अपेक्षा
जनचासो खबर| बैशाख २३, २०७९ शुक्रबार
संकटमा सबल महिला नेतृत्व
जनचासो खबर| चैत २१, २०७८ सोमबार
अधिकार प्राप्तिका लागि महिला आन्दोलन र राज्यको उपेक्षा
जनचासो खबर| चैत १, २०७८ मंगलबार
सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको
जनचासो खबर| फागुन २४, २०७८ मंगलबार
सम्पादक: सम्झना सुनुवार
सह सम्पादक: नारायण श्रेष्ठ
Contact No: ९८५१२१७१९४, ९८१८८४३५०३
© Global Connection Media Pvt. Ltd | All Rights Reserved | Powered By